Kan Sodaatanis Du’a Kan Hin Oolles Du’a -
Kan Sodaatanis Du’a Kan Hin Oolles Du’a
bilisummaa October 12, 2013	Leave a comment
WASHINGTON, DC — Irra hedduun isaanii biyyoota gaanfa Afrikaa irraa kan ta’an uummanni hedduun imaltuu hamaa kan gamoojjii sahaaraa keessaa darbuuf yeroo yaalanitti haalli lubbuu isaaniif sodaaachisu kan isaan mudatu ta’uu kanneen ijaan argan ni dubbatu.
Imala hamaa kana keessatti daran kan miidhaman ijoollee fi dubartoota ta’uun ibsameera. Kannen ituu lubbuun jiranii bubbeen cirracha gammojjii sahaaraa irra garagalee awwaalu fi kan galaanni nyaatee hambise lakkoofsa isaa sirritti kan beeku hin jiru.
Dhala namaa karaa seeraan alaa deddebisuun daldalli gageeffamu kun maallaqa guddaan kan irraa argamu garuu gocha sukaneessaa addunyaan ilaalcha itti kennu hin dandeenye ta’eera.
Maallaqa isaanii dhabanii dararamanii qaamaa hir’atanii biyya namaa keessatti rakkataa kan jiranis danuu dha.
Shamarran imala hamtuu kana keessa darbuuf carrooman keessaa tokko kan dubbatan armaa gadiitti caqas
Previous Quick guide on Preventing your system from getting Infected
Next The growing anxiety of Ethiopian university students: The case of students with twisted mind